PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - Uyindlovukazi ngevosi eyehla esiphundu
Uyindlovukazi ngevosi eyehla esiphundu
Isolezwe - 2017-09-15 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE
ZIGCWALE amehlo izinyembezi zenjabulo kuNksz Queen Mathebula (32) waseMalamulele, eLimpopo, kade ethweswa umqhele wokuba wungcweti ekuthakeni i-boerewors eyehla esiphundu.
UNksz Mathebula uphume phambili kulo mqhudelwano okuncintisana kuwo abasebenzi basemabhusha asezitolo zakwaShoprite/Checkers kuleli.
Kade kumenyezwa igama lakhe ukuthi uphume phambili emcimbini obuseLanga, eKapa, ngoLwesithathu, akazange akholwe.
Uthwale izandla ekhanda, kwehla izinyembezi wajabula nodadewabo uNksz Andzane (29) nomfowabo uMnuz Moses Mathebula (29), naye ofinyelele esigabeni sokugcina sabathathu kulo mqhudelwano osudonse iminyaka engu-25.
UNksz Mathebula oyimenenja yebhusha kuShoprite oseJilongo, eLimpopo, uthe yize eyazi i-boerewors yakhe ukuthi yehla esiphundu kepha ubengacabangi ukuthi ingagcina iphume phambili.
“Okwenza i-boerewors yami ihluke, yindlela engiyithaka ngayo nge-nutmeg ne-corriander. Lezi zithako zenza kuphume ulozolo,” kusho uNksz Mathebula, onezingane ezimbili.
Abantu bakuleli bazokwazi ukuzizwela i-boerewors yakhe njengoba kusukela namhlanje izitolo zakwaShoprite/Checkers kuleli zizoqala ukuyidayisa.
UNksz Mathebula akahlabananga nje kuphela ngokuthi i-boerewors yakhe izodayiswa ezitolo kepha uphinde wawina nengqovungqovu yeveni iToyota Hilux 2.8 GD-6 Double Cab Raised Body Raider namavawusha egilosa akwaShoprite/ Checkers.
Akujabulanga kuphela uNksz Mathebula kulo mcimbi kepha bekubhiyoza nodado abaqhamuka ezikoleni ezehlukene abebejabulela izilomo zabadlali nababedlala ibhola lombhoxo, ababenomdlalo wokunikelela iVusa Academy, okuyisikhungo sezemfundo esigxile ekuqeqesheni intsha yaseLanga, ebholeni lombhoxo.
Bekukhona o-Akhona Ndungane, Bakkies Botha noStephan Dippenaar ukubala abanye babadlali abebekhona.
Isikhulu esiphezulu sakwaShoprite, uMnuz Pieter Engelbrecht sihalalisele uNksz Mathebula, sathi lo mqhudelwano uhamba emgomeni wabo wokuguqula nokwenza ngcono impilo kubantu.
“Asigcini nje kuphela ngokuba namanani aphansi kepha manje sifuna abantu bakwazi ukuthenga ezitolo zethu. Yingakho nje sesisungule nohlelo lokuthi kube nokudla (meal) okusuka ku-R5 umthengi angakuthola ezitolo zethu. Siyazi isimo sinzima njengoba kunenqwaba yabantu abahluphekayo abangazi nokuthi bazolala bedleni. Sifuna ukuthi noma ngabe uno-R5 kodwa ukwazi ukuthola okuya ethunjini kwaShoprite,” kusho u-Engelbrecht.